Newer, Older and home ​မှာ ​ပုံ​အ​စား​ထိုး​ထည့်​နည်း ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
tunaung.s May 14, 2010 at 11:43 PM
​ကျ​နော်​က ​အ​ခု​မှ ​ဘ​လောဂ် ​ကို​စ​လေ့​လာ​တဲ့​သူ​ပါ
​ပို့စ် ​တင်​တိုင်း ​ပို့်စ် ​တိုင်​တည် ​နေ​ရာ​မှာ ​ဖောင့်​တွေ​က ​ကြီး​နေ​တယ် ။ ​အဲ​ဒါ
​ဖောင့် ​ဘယ်​လို​သေး​ရ​မ​လဲ ​အ​ကို၊ ​နောက် ​စာ​ကြောင်း​အ​ကွား​ဝေး​ကို​ရော​ပေါ့
​နောက် ​လယ်​ဘယ် ​မှာ ​မူ​လ​စာ​မျက်​နှာ​ကို​ဘယ်​လို​ထည့်​ရ​မ​လဲ​အ​ကို၊ ​ထည့်​နည်း​လေး​ပါ
​ကျ​နော်​ယူ​ရဲ့ ​ဘ​လေဂ် ​တန်​ပ​လိပ်​မှာ​က ​အိုး​ပို့စ် ​တို့ ​န​ယူး​ပို့စ် ​တို့
​မြန်​မာ​အ​လုပ်​သ​မား​များ​ကွန်​ယက် July 10, 2010 at 3:35 PM
​ဒါ​ပေ​မဲ့ ​အ​ကို​ပြော​တဲ့​အ​တိုင်း​ကျ​နော်​လုပ်​ကြည့်​တာ ​ပုံ​တွေ​မ​ပေါ်​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်။ ​အဲ​ဒီ newer posts. older posts. home ​တို့​က​ပုံ​တွေ​ပေါ်​အောင် ​ဘယ်​လို​ပြန်​လုပ်​ရ​သေး​လဲ​ခင်​ဗျာ ... ​အ​ခု​က box ​ပဲ​ပေါ်​နေ​တယ် . ​ရှင်း​ပြ​ပေး​ပါ​ဦး ....